गाउँपालिका अध्यक्षलाई यात्रा गर्न घोडा » Chitwan Samachar - चितवन समाचार
गाउँपालिका अध्यक्षलाई यात्रा गर्न घोडा
चितवन समाचार | २९ भाद्र २०७६, आईतवार ०६:४१ |
रुकुम २९ भदौ । रुकुम (पूर्व)को पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्तीको सवारीसाधनका लागि घोडा किनेको छ । अध्यक्ष घर्ती प्रायः सबै कार्यक्रममा घोडा नै चढेर पुग्छन् । १४ वडा रहेको गाउँपालिकाका नौवटा वडा सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । बाँकी पाँचवटा वडालाई कच्ची सडकले छोएको मात्रै छ । त्यसैले घोडा नै सवारीसाधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपरेको अध्यक्ष घर्तीले बताए ।
घोडाकाे मुल्य डेढ लाख
गाउँपालिकाले ०७४/७५ मै डेढ लाखमा घोडा किनेको हो । घोडामा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीका लागि करिब एक लाख खर्च गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र बुढा क्षेत्रीले बताए ।
गाउँपालिकाले घोडापछि गाडी पनि किनेको छ । तर, सडक नै नभएपछि गाडी हुनुको झन् के अर्थ ? ३६ लाखमा किनेको स्कार्पियो प्रयोविहीनजस्तै बनेको छ । घोडा धेरैजसो अध्यक्षले नै चढ्ने भए पनि आवश्यकताअनुसार कार्यपालिका सदस्यले पनि चढ्छन् । उपाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधि भने प्रायः पैदलै हिँड्ने गाउँपालिका प्रवक्ता भीमबहादुर मल्लले बताए ।
कसरी चलेको छ घोडा पाल्ने खर्च ?
गाउँपालिकाले घोडा किने पनि खान्की र स्याहारका लागि खर्च नछुट्याएको प्रवक्ता भीमबहादुर मल्लले बताए । गाउँपालिकामै तबेला बनाइएको छ, कार्यालय सहयोगी उज्ज्वल सेनले स्याहार गर्छन् । घोडाको दानापानी भने प्रयोग गर्ने व्यक्तिले नै व्यवस्था गर्ने गरेको प्रवक्ता मल्लले बताए । ‘जसले प्रयोग गर्छ उसैले खुवाउनुपर्छ, तर चरन क्षेत्र राम्रो भएकाले घोडाको खान्कीमा खासै खर्च हुँदैन,’ उनले भने ।
नया पत्रीका बाट